ပရိုဂျူဆာ ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ခြံလေးကို ရောင်းနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပြေဇင်….
June 28, 2019 Thuta Star 0
သ ရုပ်ေ ဆာင် ပြေဇင်ကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက် ရိုက်ချင်လို့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခြံလေးကို ရောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပိုက်ဆံပိုနေကြသူများ သူ့ရဲ့ ခြံလေးကို ဝယ်ကြပါလားဆိုပြီး ပြောထားတာပါတယ်။ ပြေ ဇင် က သူကိုယ်တိုင် ပရိုဂျူဆာ ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက် ရိုက်ချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
ကြည်နူးမှု၊ လွမ်းဆွေးမှုတွေ တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားစေမယ့် SONG SONG COUPLE ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး…
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်စုံတွဲတွေများစွာထဲမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စုံတွဲလေးကတော့ Song Joong Ki နဲ့ Song Hye Kyo တို့ပါပဲ။ ဇာတ်ကားအတူရိုက်ကူးရင်းကနေတဆင့် တွေ့ဆုံချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတဲ့ သူတို့ ၂ ယောက်ဟာ ဇာတ်ကားထဲမှာကတည်းက လိုက်ဖက်ညီစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသူမို့လို့ ပရိသတ်တွေက သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၂ ယောက်သား အပြင်မှာ […]
တောင်ပေါ်က ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးကိုတွန်းချလုပ်ကြံပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသည့်အမျိုးသား ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရ …
ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း ဖထမ် အမျိုးသားဥယျာဉ်ကို အလည်အပတ်လာ တဲ့ တရုတ်ခရီးသည်အမျိုးသား ယုရှောင် တုံက ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးဖြစ်တဲ့ ဝမ်နန်ကို ပေ ၁၁၀အမြင့်ရှိတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်က နေ တွန်းချလုပ်ကြံခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူခံလိုက်ရပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ တောင်ထိပ်ကနေ မတော်တဆပြုတ်ကျ သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီး လုံခြုံရေးတွေကို ယု ရှောင်တုံက အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါ […]
( အားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ) မြစ်ကြီး ၁၃ စင်း.. မြစ်ရေကြီးနိုိင် …
နောက် ၂ လအတွင်း မြစ်ကြီး ၁၃ စင်း မြစ်ရေကြီးနိုိင်တယ်လို့ သတိပေး ဇွန် – ၂ ၈ ၊ ၂၀၁၉။ လာမယ့်် ဇူလိုင် နဲ့ သြဂုတ်လတွေအတွင်း မြစ် ၁၃ စင်းမှာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကို ကျော်လွန် ရောက်ရှိနိုင်တယ် လို့ […]
တိုက်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျလာတဲ့ ကလေးကို အောက်ကနေ ဆီးဖမ်တဲ့( ရုပ်သံ )…
အီစတန်ဘူလ်မြို့ရှိ နေအိမ်တိုက်ခန်း ဒုတိယအထပ်ကနေ ပြုတ်ကျလာတဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်လေးကို လမ်းသွားလမ်းလာ လူငယ်တစ်ဦးက အောက်ကနေ အချိန်မီ ဆီးဖမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကလေးဟာ အသက်အန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် Fawzi Zabaat ဆိုသူ လူငယ် လမ်းလျှောက်လာစဉ် တိုက်ခန်း ဒုတိယအလွှာရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ […]
“ခြင်ဆေးခွေမလို ! အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင်မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း” …
မင်္ဂလာပါ…ခြင်မလာအောင်ခြင်ကာကွယ်တဲ့ဆေးနည်းကလေးပေးပါမယ် စပါးလင်အရွက် လေးညှင်းပွင့် သံပုရာသီး တို့ကိုရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီးရေတဝက်ရောက်အောင်ပြုတ်ပေးပါ(အဖုံးအုပ်ပြီးပြုတ်ပါ) စပါးလင်အရွက်ဖားဖားတပင်လေးညှင်းပွင့်ဆယ်ပွင့်သံပုရာသီး၃လုံးနှုန်းသည်ရေ(ရေသန့်ဗူးတဗူးခွဲ)ထည့်ပြုတ်ပြီးအရည်တလီတာနီးနီးအကျန်(ရေသန့်ဗူးတဗူးမပြည့်တပြည့်)ရေတဝက်ကျန်ကပိုကောင်းပါသည် ပြုတ်ပြီးအဖတ်တွေကိုခြင်တွေပေါက်နိုင်တဲ့ရေဝပ်နေတတ်သောနေရာမှောင်နေတတ်သောနေရာတွေကိုထားလိုက်ပါ…ပြုတ်ပြီးအရည်များကိုခြင်ဆေးရေအဖြစ်ရေဖြန်းဗူးတွင်ထည့်ဖြန်းပါ…တပတ်လောက်တော့အထားခံပါသည်ရေရှည်အထားခံနည်းမသိပါ ပြုတ်ပြီးလျှင်အေးသွားပါကအရည်နှင့်အဖတ်များကိုသီးခြားဖြစ်အောင်ထားပေးပါ.. တောရှောက်ခါးသီးနှင့်လုပ်ပါကအနံ့ပိုကောင်းပါသည်….မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အိမ်အပြင်ဖက်တွင်ရေမြောင်းနှင့်အမှိုက်များကိုရှင်းလင်းပေးပါ…မိမိ၏လက်များနှင့်တကွတကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါ ခြင်ကိုက်မခံပါနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးသူငယ်များနေ့မှာအိပ်အိပ်ညမှာအိပ်အိပ်ခြင်ထောင်နှင့်အိပ်ပါ….နှာစေးချောင်းဆိုးမဖြစ်အောင်စပါးလင်နှင့်ဂျင်းပြုတ်ရေများသောက်ပေးပါ…(ထန်းလျက်/သကြား/ပျားရည်)တို့နှင့်တွဲသောက်နိုင်ပါသည် ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပြီးပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်နေရင်လက်နဲ့ဆုတ်ပက်လိုက်သလိုခြင်အုံခဲနေသောခြင်တွေကျွန်တော်အိမ်မှာ မဖြစ်တော့ပါ (တခါမှချီးမွန်းခန်းမဖွင့်တဲ့မေမေကတောင်တယ်ဟုတ်ပါလားတဲ့-) လေးလေးဂျစ်တူး 25-6-2019 လိုအပ်ပါကညွန်ကြားပေးစေလိုပါသည်
လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဂျွန်ကီ နဲ့ ဆောင်းဟေဂျိုရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့ ကာယကံရှင် ဆောင်းဂျွန်ကီ နဲ့ ဆောင်းဟေဂျို နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့ အဆင်ပြေကြပုံ မပေးပါဘူး။ ဆောင်းဟေဂျို […]
မြန်မာနိုင်ငံက ယောကျာ်းတော်တော်များများက နောလေးကိုမကပ်ချင်ကြတာလား မကပ်ရဲတာလားလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ J Naw
မြန်မာနိုင်ငံက ယောကျာ်းတော်တော်များများက နောလေးကိုမကပ်ချင်ကြတာလား မကပ်ရဲတာလားလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ J Naw J Naw ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Sexy မော်ဒယ်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယောကျာ်တွေက ဘယ်တော့မှ မရင့်ကျက်တဲ့ ကလေးတွေလိုပဲလို့ သက်မှတ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ […]
မိဘတွေအတွက် သာသနာ့ဘောင်ထဲ ခဏ ဝင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ကောင်းထက်ဇော်
မိဘတွေ ကံနိမ့်နေလို့ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ခဏ ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းထက်ဇော်Channel7ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ မိသားစုပြိုင်ပွဲ ၊ Money Drop (ငွေတွေဝင်) စတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် အခြားသော အစီအစဉ်များစွာနဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သူက ကောင်းကြီး (ခေါ်)ကောင်းထက်ဇော် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ […]
“ဟာ ချယ်ရီထက် ကားပေါ်က ပြုတ်ကျပြန်ပြီတဲ့ ”
ဟာ ချယ်ရီ ကားပေါ်က ပြုတ်ကျပြန်ပြီတဲ့ 😭 ဓနုဖြူမြို့ကို အမေ့ယာဉ်တန်းဖြတ်တော့ ဝှီးချဲတစ်စီးကအမေ့ယဉ်တန်းဖြတ်မယ့် လမ်းပေါ်ထိ ရောက်နေလို့ မလွတ်တဲ့အတွက် ကားပေါ်ကနေ ခိုလိုက်လာတဲ့ ချယ်ရီက ဆင်းဖယ်ဖို့အတွက် ခုန်ချရာမှာအရှိန်လွန်ပြီး ပြုတ်ကျသွားလို့ အနဲငယ် ပွန်းပဲ့သွားပါတယ်တဲ့ ဆွဲထူတဲ့ လူကြီးကြောင့် ပိုပွန်းပဲ့သွားပါတယ်…ချယ်ရီကို နောက်ဆို ကားပေါ်က ခုန်မချခိုင်းပါနဲ့..ယောင်္ကျားတွေအများကြီးပါတာ […]